भिडियो – Wow Sansar
चितवनका कन्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमालको प्रेम प्रशंगले यतिबेला निक्कै चर्चा बटुलेको छ । कारण उनीहरुले काठमाडौँमा गएर विवाह गरेपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किएपछी कन्चनले विष पिएर आ’त्मह’त्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । विवाह गरेर पुन: घर फर्किएकी अनिशा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा आएकी छन । अनिशाका अनुसार उनीहरुको चिनजान फेसबुक मार्फत भएको थियो । विस्तारै उनीहरुको फेसबुक मै मायाको कुरा भएको स्विकारिन । तर अनिशाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार नगरेको बताइन । कन्चनले काठमाडौँ लगेर जवर्जस्ती सिन्दुर लगाईदिएको समेत उनले बताइन । अनिशाको परिवारले छुट्टाईदिने भन्दै कन्चनले जबर्जस्ति सिन्दुर लगाई दिएको परिवारले पनि आरोप लगाएका छन । कन्चनले जवर्जस्ती सिन्दुर लगाएको फोटो खिचे पछि मात्र घर पुर्याईदिने भने पछी आफुले त्यसो गरेको अनिशाले बताइन । तर यता कन्चनका परिवारको भने अर्कै दावी रहेको छ । कन्चनका आमाक
काठमाण्डौ । पुर्व प्रहरी हवल्दार सुवास देवान आफ्नै श्रीमतीबाट विगत तीन वर्षदेखि ठगी रहे । आफ्नै श्रीमतीसंग पनि कोही ठगीन्छन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । तर उनी ठगीए । जबकी उनी आफै पनि प्रहरी हुन् । एउटा नेपाल प्रहरीको हवल्दार जस्तो मान्छे आफ्नै श्रीमतीबाट ठगीएको भन्ने कुरा सुनेर अचम्मित मान्नु स्वभाविक नै हो । २०७५ सालको अषाढदेखि घर छाडेर निस्किएकी श्रीमतीसंग अक्कल झुक्कल सुवाससंग सम्पर्क भईरहेको हुन्थ्यो । श्रीमान हुँदाहुँदै अर्कैसंग बिहे गरेकी उनकी श्रीमती उषाले आफुले बिहे नगरेको तर कुनै आफन्तकोमा बसिरहेको र घरमा फर्कने कुरा गरेको हुनाले सुवासले पनि उनको कुरामा विश्वास गरेका रहेछन् । उनले श्रीमतीको भनाईमा विश्वास गर्दै गईरहे तर उनकी श्रीमतीले भने सुवासले आफुलाई धेरै माया गर्ने र विश्वास गर्ने भएकोले जे भनेपनि हुन्छ भन्ने सोंचेर उनलाई मुर्ख बनाई रहिन् । र सुवास पनि श्रीमतीको कुरामा अन्जान
काठमाडौ । ममी तिमीलाई प्रेसरको समस्या छ तिमी आफ्नो ख्याल गर भन्दै मंसिरको २७ गते फोन गरेको छोरा त्यसको एक महिना पछि मृत भएको समाचार आएपछि आमा भक्कानिएकी छन् । छोरालाई उनले सुधार केन्द्रमा पठाएकी थिइन् । जिवन राम्रो बनाउन भन्दै सुधार केन्द्रमा पठाएको छोराको जिवन नै सकिएपछि आमाले आफुलाई सम्हालिन सकेकी छैनन् । उनले छोराले देह त्याग गरेको भनेर विश्वास गरेकी छैन् । उनले घटना रहस्यमय भन्दै त्यसको निश्पक्ष छानविन गर्न र दोशीलाई कारवाही गर्न माग गरेकी छन् । उनले भनिन्, मैले महिनामा २० हजार तिरेर सुधार केन्द्रमा राखे निको भएर घर फर्कने बेलामा छोरा नै गुमाउनु परेको छ । उनले आफ्नो छोराको निधन भएको ठाउँको घटनास्थल हेर्दा रहस्यमय देखिएको बताएकी छन् । उनले निधन भए पछि घटनास्थलमै शव नराखेर अर्को कोठामा लगेको बताएकी छन् । गत पुष २७ गते १७ वर्षका अजिज मियालाई ६ महिना अघि दमौली स्थित सुधार केन्द्रमा ल
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला,काठमाडाैं, २३ पुष । भारतको खोप उत्पादक कम्पनी भारत बायोटेकले नेपालमा पनि कोरोना खोप ‘कोभ्याक्सिन’ क्लिनिकल ट्रायल चलिरहेको झूटो दाबी गरेको पाइएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण एम ऐल्लाले अघिल्लो सोमबार कम्पनीद्वारा उत्पादित कोभ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनकल ट्रायल नेपाललगायत विभिन्न १२ मुलुकमा चलिरहेको दाबी गरेको थिए । तर, कम्पनीले नेपालमा कोरोना खोपका क्लिनिकल ट्रायलका लागि हालसम्म अनुमति नलिएको पाइएको छ । नेपालको कानुनका अनुसार कुनै पनि खोपको परीक्षण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । अनुमति नलिएको हुँदा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारत बायोटेक मात्र नभएर अन्य कुनै पनि कम्पनीले क्लिनिकल परीक्षणका लागि अनुमति लिएका छैनन् । गत आइतबार मात्र भारत सरकारको बायोटेकद्वारा उत्पादित कोरोना खोप कोभ्य
नेपालमा प्रतिनिधिसभा विगठन भई तीव्र राजनी’तिक ध्रुवीकरण देखा परेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिन केही दिन अघि नेपाल आइपुगेको टोली हेलि’कोप्टर चार्टर गर्दै सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेको थियो। उक्त स्थानमा लिइएको ‘पिस टु क्यामेरा’मा जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गरिनुपर्ने र त्यसको अभियान नै चलाउने बताएका थिए। पत्रकारिताका वि’ज्ञहरूले भने यस विषयलाई महत्त्व दिने कि नदिने भन्ने विषयमा फरक-फरक मत राखेका छन्। यसअघि पनि जी न्यूजले प्रधान’मन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर तयार पारेको सामग्री आपत्तिजनक रहेको बताउँदै केवल टिभी सञ्चाल:कहरूले उक्त च्यानल सहित अन्य केहीको प्रसार’णमा रोक लगाएका थिए। पटक-पटक भारतीय सञ्चारमा’ध्यमहरूले प्रसारण गर्ने यस्ता विषयवस्तुका सन्दर्भमा नेपालका सञ्चारमाध्यम’हरूले स्थान दिनु कत्तिको आवश्यक छ त
काठमाण्डौ । पुजा विश्वकर्मा यिनी दुई नामले चिनिन्छिन् । एक समाजसेवी त अर्को विनयजंग बस्नेतकी हुनेवाला श्रीमतीको रुपमा । समाजसेवी भन्दा पनि पछिल्लो समय पुजा विनयजंगसंगको विबाहको विषयमा अलि बढी नै चर्चा रहेकी छन् । विनयजंगले परिवार सामू नै प्रस्ताव राखेको हुनाले उनीसंग विबाहकोलागी परिवारबाटै स्वीकृति पाएको भन्दै पुजाले खुलेरै विनयजंगसंगको विबाहको विषयमा विभिन्न अन्तरवार्तामा बोलेकी छिन् । तिनै पुजा विश्कर्मा पछिल्लो समय एउटा अर्को काण्डमा चर्चित बनेकी छन् । त्यो काण्ड हो, पानी बेचेर आफ्नो जाहो गरिरहेकी सानी नानी अर्चनाको २० हजार खाएर भाग्दै हिंडेकी छन् भन्ने । यो कत्तिको साँचो हो त्यो पुजाले नै भनेपछि थाहा होला तर यतिबेला भने उनले ती सानी नानीलाई कार्यक्रम ईन्द्रेणीद्धारा सहयोग स्वरुप दिईएको २० हजार खाएर भागेको भन्दै चौतर्फि समाचार बनाएर भाइरल गरिएको छ । ती नानीको उक्त रकम असुल्नकोल
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, किर्पया पुरा हेर्नुहोला । ब्रसेल्स, माघ । बेल्जियमको लुभेन नगरपालिकामा ईतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय राजनीतिमा पहुँच राख्दै नगर सदस्य पदमा नेपाली मुलका कृष्ण सगुन क्षेत्री चुनिन सफल भएका छन् । पश्चिम नेपालको पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा जन्मिएका क्षेत्री सन् २००४ मा विदेश लागेका थिए । उनी दश वर्ष नेदरल्याण्डमा बसेका थिए, भने सन् २०१४ मा मात्रै बेल्जियम सरेका थिए । ब्रसेल्ससँगै जोडिएको लुभेन नगरपालिकामा बस्दै आएका क्षेत्रीले प्रमाण–पत्र तहसम्मको नेपालमै औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । यूरोपको मुटुको रूपमा परिचित बेल्जियमको भ्लान्दरण प्रान्तमा बोलिने डच भाषामा पोख्त रहेका क्षेत्री श्रीमति सगुन केसी, छोरा अभियान र छोरी आर्यानासहित चार जनाको परिवारसँगै बस्दै आएका छन् । रेष्टुरेन्ट ब्यबसायी समेत रहेका क्षेत्रीले आगामी २५ जनवरीमा सपथग्रहण पश्चात औपच
काठमाण्डौ । आफ्नै जन्म दिने बाबुलाई सानोमा आफुलाई र आमालाई नहेरेको भन्दै छोराले वास्ता नगरेपछि अहिले उनका ती छोराका बाबु बृद्धा आश्रममा छन् । उनले दिनहुँ गेटमा अरुलाई नै भेट्न कोही आउँदा पनि आफ्ना छोराहरु आएकी भनेर बाटो हेरी बस्छन् । उमेरले ७० लागेका ती बाबु हुन् किशोर लामा । उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमती पनि जिउँदै छन् । सबै परिवार हुँदाहुँदै पनि उनी बृद्धाश्रम गएका छन् । त्याहाँ बसेर उनले प्रत्येक दिन आफुलाई भेट्न घरबाट कोही त आउँछन् होला भन्दै गेटतिर हेरिरहन्छन् । तर उनको परिवारबाट आजसम्म न छोराछोरी गए भेट्कोलागी न त श्रीमती नै । आखिर किन ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छन् । किन आफ्नै श्रीमानलाई बृद्धाश्रम जान बाध्य बनाईन् श्रीमतीले र छोराछोरीले बाबुलाई ? भन्ने प्रश्न उनको श्रीमती र छोरालाई गर्दा उनीहरु भन्छन्,‘त्यो उस्लाई पापको सजाय भएको हो । अझैं धेरै हुन बाँकि छ ।’ यस्तो जवाफ सुनेर
भिडियो यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला चौतर्फी अविश्वासबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी वैशाखमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छन् । ‘सर्वोच्च अदालतभन्दा जनता ठूलो अदालत हो’ भन्दै उनले पार्टीलाई निर्वाचनको पक्षमा रहेको सन्देश ‘जबर्जस्ती’ दिन खोजेका छन् । पार्टीभित्रै शीर्षस्थ नेताहरूले वैशाखमा निर्वाचन हुने देउवाको भनाइ पत्याइरहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै नहुने तर्क गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल राजनीतिक परिदृश्य उनीहरूले आकलन गरिरहेका छन् । ०५९ जेठ २ गते आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको इतिहास स्मरण गर्न देउवालाई बारम्बार सचेत पनि गराएका छन् । देउवा यतिबेला कसैको आग्रह र सुझाव सुन्न तयार छैनन् । अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई सदर गरे तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने उनमा रत्तिभर श
भिडियो यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला काठमाडौं। पनौतीका सन्तोष थापाको मन अशान्त छ। सामान्यतः छोरा जन्मिएपछि सन्तोष हुने नेपाली समाजमा भारी मन बनाएर बसेका छन सन्तोष। जीवन संगीनी रञ्जिता तामाङको कोखबाट ९ महिना अघि सिरषको जन्म भयो। सिरष धर्तीमा पाइलाटेक्नु पूर्व नै रोगी भएका रहेछन्। गर्भमा रहँदै जण्डीसजस्तो घातक रोगको शिकार भएका ९ महिने सिरष अहिले जीवन र मृत्युसँग पौंठेजोरी खेलिरहेका छन्। गरिवीले पीडित रञ्जिताको दम्पत्तिमाथि अर्को ब्रजपात भयो। ‘भगवान पनि कति निष्ठुरी हुन्छन्’, रञ्जिताले भारी मन बनाएर भनिन्, ‘हामीले कति धेरै प्राथना गर्यौं। कहिलै सुन्नु भएन।’ आमाको काखमा लुटुपुटु गर्ने उमेरमा रोगसँगको संघर्षले सिरष पनि दिन प्रतिदिन दुब्लाउँदै गएका छन। बोली नफूटे पनि ओठको हाउभाउमा गफिनु पर्ने आमाबुबा भारी मन बनाएर सिरषले लडिहरेको युद्ध हेरिरहेका छन्। सिरषले लडिरहेको युद
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6721)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3593)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (537)
खुसीको खबर 👏👏❤️ हिजो महानगरपालिकाले ठेला र रोज़गार खोसिदयो आज खाता ५ लाख जम्मा